I-Thailand emangazayo iyaqubuda kwi-wai: I-Rosewood Bangkok, ihotele ye-COVID yexhoba
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » I-Thailand emangazayo iyaqubuda kwi-wai: I-Rosewood Bangkok, ihotele ye-COVID yexhoba
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ihotele iRosewood eBangkok
Xa kwavulwa iRosewood yaphinda yabumba isibhakabhaka seBangkok. IRosewood Bangkok libali elinemigangatho engama-30, elibonakalayo eliqaqambileyo, elimileyo lokwakha okumangalisayo. Uhlobo lwayo lwangoku luphefumlelwe yi-wai, isenzo esidumileyo saseThai sokubulisa. I-silhouette yanamhlanje yimbonakalo yoyilo lomoya wase-Thai. Inkcubeko etyebileyo yaseThai ikwagxininiswa zizinto zoyilo lwangaphakathi kunye neempawu ezintle zamanzi ngaphakathi ehotele ebutofotofo erhafisa iBangkok, isixeko esakhiwe emanzini.
Ihotele iRosewood Bangkok yehotele enemigangatho engama-30 eBangkok, eThailand iphakathi kwamashishini abuk 'iindwendwe asokolayo.
Izithintelo kuhambo lwamazwe aphesheya ziphantse zakunqanda ukuhamba kwezithuthi zabakhenkethi.
"Abasebenzi baseRosewood bazisiwe ngesibhengezo sokuvalwa ngoLwesibini," utshilo ummeli wehotele, ngehotele ivala ngoMgqibelo.
Ummeli uthethe ngemeko yokungachazwa, kwaye ihotele yenqabile ukuphawula ngakumbi.
Xa kwavulwa iRosewood Bangkok yathi yayilungiselelwe ukuseka i icon entsha yoyilo kwikomkhulu lobukumkani nakwinqanaba lehlabathi. Ngoku i-COVID-19 iyibulele.
IRosewood Bangkok yiprojekthi yemakethi ephuhliswe yiRende Development Co, Ltd. ephethwe lusapho lukaThaksin Shinawatra, owayesakuba yinkulumbuso yaseThailand.
"Ukuvalwa okwethutyana kweRosewood Bangkok kwenzelwe ukuseka indawo phakathi kokungaqiniseki," uPaetongtarn "Ing" Shinawatra, uSekela-Mlawuli oyiNtloko waseRende kunye nentombi kaThaksin, ubhale kuFacebook.
Ukhuseleko lwabo bonke abasebenzi behotele kunye neendwendwe luthathwa njengeyona nto iphambili, utshilo.
Abaninzi ababukeleyo banenkxalabo yokuba ihotele ingathengiswa okanye iphindwe yenziwe emva kokuvalwa kwayo.
UMarisa Sukosol Nunphakdi, umongameli we Umbutho weehotele zaseThai, wacela urhulumente ukuba avumele iivenkile zokutyela kwiihotele ukuba ziphinde zivulwe ngokuthobela umyalelo wokunciphisa izithintelo kwiindawo zokutyela.
Amaziko okuqina, amachibi okudada, kunye namagumbi okuhlangana kwiihotele nawo kufuneka avunyelwe kunye nemigaqo ethile, utshilo uMarisa.